မျက်လုံးတဝိုက် နှိပ်ပေးတဲ့ မျက်မှန် Eye Care Massager | Myanmar Free Ads ' : ''; var month = [1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]; var month2 = ["Jan","Feb","Mar","Apr","May","Jun","Jul","Aug","Sep","Oct","Nov","Dec"]; var day = postdate.split("-").substring(0,2); var m = postdate.split("-"); var y = postdate.split("-"); for(var u2=0;u2
Home / Electronic Products / Gadget / မျက်လုံးတဝိုက် နှိပ်ပေးတဲ့ မျက်မှန် Eye Care Massager
မျက်လုံးတဝိုက် နှိပ်ပေးတဲ့ မျက်မှန် Eye Care Massager
Maung Pauk 4:30 PM Electronic Products , Gadget
မျက်ရိုးကိုက်တာကို ကိုယ့်ဟာကိုယ်နှိပ်လည်းရတာပဲလေ.. ဒါပေမယ့် နည်းပညာဆန်းပြားလာတဲ့ခေတ်မှာ ကိုယ်ကိုယ်တိုင် နှိပ်စရာမလိုတော့ဘူး.. မျက်လုံးတဝိုက်နှိပ်ပေးမယ့် မျက်မှန်ပေါ်လာပြီ.. AA ဓာတ်ခဲလေး ၂ လုံး နဲ့အသုံးပြုရတဲ့ လျှပ်စစ်ပစ္စည်းလေး.. သူ့ရဲ့လုပ်ဆောင်ချက်ကတော့ Vibration လေးနဲ့ မျက်ဝန်းတစ်ပတ် နှိပ်ပေးတာ..
ဘာတွေ အကျိုးရှိလို့လဲ ???
မျက်လုံးအားစိုက်လုပ်ရလို့ မျက်အိတ်ကျခြင်း ၊ မျက်ကွင်းညိုခြင်း၊ မျက်ရိုးကိုက်ခြင်း ၊ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊ ကွန်ပြူတာအသုံးများ၍ မူးဝေခြင်းတို့ကို သက်သာစေပါတယ်...
ကွန်ပျူတာကို တောင်လျှောက်ကိုင်ရတဲ့သူတွေ၊ ဖုန်းပွတ်လွန်းလို့ မျက်ရိုးကိုက်တတ်သူတွေအတွက်တော့ ကွက်စတိပဲဗျို့... စာဖတ်ရလွန်းတဲ့ ကျောင်းသားတွေအတွက်လည်း အထူးသင့်လျော်တာပေါ့. တစ်ခါ နှိပ်ရင် ၁၅ မိနစ်လောက်ပဲ နှိပ်နှော...
ဈေးလား.. မများပါဘူး.. 13500 ကျပ် တည်းရယ်... လိုချင်ရင် 09451689031, 09787179972 ကိုဖုန်းသာဆက်လိုက်...
မကျြရိုးကိုကျတာကို ကိုယျ့ဟာကိုယျနှိပျလညျးရတာပဲလေ.. ဒါပမေယျ့ နညျးပညာဆနျးပွားလာတဲ့ခတျေမှာ ကိုယျကိုယျတိုငျ နှိပျစရာမလိုတော့ဘူး.. မကျြလုံးတဝိုကျနှိပျပေးမယျ့ မကျြမှနျပျေါလာပွီ.. AA ဓာတျခဲလေး ၂ လုံး နဲ့အသုံးပွုရတဲ့ လြှပျစဈပစ်စညျးလေး.. သူ့ရဲ့လုပျဆောငျခကျြကတော့ Vibration လေးနဲ့ မကျြဝနျးတဈပတျ နှိပျပေးတာ..
ဘာတှေ အကြိုးရှိလို့လဲ ???
မကျြလုံးအားစိုကျလုပျရလို့ မကျြအိတျကခြွငျး ၊ မကျြကှငျးညိုခွငျး၊ မကျြရိုးကိုကျခွငျး ၊ခေါငျးကိုကျခွငျး၊ ကှနျပွူတာအသုံးမြား၍ မူးဝခွေငျးတို့ကို သကျသာစပေါတယျ...
ကှနျပြူတာကို တောငျလြှောကျကိုငျရတဲ့သူတှေ၊ ဖုနျးပှတျလှနျးလို့ မကျြရိုးကိုကျတတျသူတှအေတှကျတော့ ကှကျစတိပဲဗြို့... စာဖတျရလှနျးတဲ့ ကြောငျးသားတှအေတှကျလညျး အထူးသငျ့လြျောတာပေါ့. တဈခါ နှိပျရငျ ၁၅ မိနဈလောကျပဲ နှိပျနှော...
စြေးလား.. မမြားပါဘူး.. 13500 ကပျြ တညျးရယျ... လိုခငျြရငျ 09451689031, 09787179972 ကိုဖုနျးသာဆကျလိုကျ...